प्रकाशित: शुक्रबार, चैत २७, २०७७, ०६:१४:०० धिरज बस्नेत
७२ फिटको मुखाकृति, २० फिटको कान र ११ फिटको नाक। तीन वटा आँखा र पाँच वटा खप्पर! रिसाएको भावका ठूलाठूला आँखा, फुलेका नाकका पोरा। तपाईंलाई लाग्न सक्छ– कस्तो रौद्र आकृति हो यो ? हो, ललितपुरमा यस्तै आकृतिको भैरवको मूर्ति तयार हुँदै छ।
मूर्ति बनाउन व्यस्त छन् राजकुमार शाक्य। विश्वमै ठूलो भैरवको मूर्ति बनाएर कीर्तिमान कायम गर्न लागिएको उनले बताए।
शाक्यका अनुसार यति ठूलो मुखाकृतिको मूर्ति विश्वमा छैन। ग्रिसमा करिब एक सय वर्षअघि ४२ फिट अग्लो मुखाकृति निर्माण भएको रेकर्ड छ। मूर्ति निर्माण उनी अध्यक्ष रहेको नेपाल आर्ट भिलेज कम्पनीले गरिरहेको छ।
मूर्ति बनाउन करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसको सम्पूर्ण लगानी कम्पनी आफैंले बेहोर्नेछ।
शाक्यले भने, ‘मूर्ति निर्माणमा हामीले कुनै सरकारी निकायसँग अनुनय गरेका छैनौं। मूर्ति त आफैं बनाइहाल्छौं। स्थापना गर्ने चाँजोपाँजो र अपुग जमिनचाहिँ सरकारले मिलाइदिए हुन्थ्यो।’
मूर्ति ललितपुरको छम्पीमा पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा स्थापना गर्ने नेपाल आर्ट भिलेजको तयारी छ। उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने गरी बगैंचालगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
एकान्तकुनाबाट १२ किमि दक्षिणमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा केही जमिन लिएको उनले बताए। बाँकी जमिनका लागि नगरपालिकासँग छलफल भइरहेको छ। ७० प्रतिशत काम सकिएको भैरवको ७२ फिटको मुखाकृर्तिको मूर्ति २०७९ को नयाँ वर्षमा स्थापना गर्ने योजना रहेको शाक्यले जानकारी दिए।
यसरी जाग्यो मूर्ति बनाउने हुटहुटी
शाक्य ४० वर्षदेखि धातुको मूर्ति बनाउँदै आएका छन्। उनले अहिलेसम्म सयौं धातुका मूर्ति बनाएका छन्। विदेशमा समेत निर्यात गरेका छन्।
शाक्य सन् २०१० मा भुटान सरकारको निमन्त्रणामा बुद्धको मूर्ति बनाउन थिम्पु गएका थिए। उनको टोलीले चार वर्ष लगाएर ११५ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति बनायो। उनी भन्छन्, ‘मलाई उतिबेला आफ्नो देशमा पनि विश्वले चिन्ने मूर्ति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो।’
उनी भुटानबाट २०७१ मा फर्किए। उनी सम्झन्छन्, ‘कुन भगवानको मूर्ति कहाँ राख्ने, कसरी बनाउने भनेर खोजी थाल्यौं। हामीलाई रेकर्ड राख्ने मूर्ति बनाउनु थियो। त्यसैले गुगल सर्च गर्‍यौं।’
गुगलमा विश्वमा मुखाकृतिको मात्रै अजंगको मूर्ति बनेको रेकर्ड फेला परेन। ग्रिसमा ४२ फिटको एउटा मुखाकृर्तिको मूर्ति बनेको थियो। उनीहरूले उक्त रेकर्ड तोड्दै ७२ फिटको बनाउने निर्णय गरे। त्यसका लागि नेपाल आर्ट भिलेज नामक कम्पनी दर्ता गराए। २०७४ बाट मूर्ति बनाउने काम सुरु भएको शाक्य बताउँछन्।
शाक्य स्थापना गर्ने ठाउँ खोज्न धेरैतिर भौंतारिए। सांस्कृतिक र भौगोलिक बनोट, स्थानीयसँगको छलफलका आधारमा मूर्ति ललितपुरको छम्पीमा राख्ने टुंगो लागेको शाक्य बताउँछन्।
भैरवकै मूर्ति किन ?
काठमाडौं उपत्यकामा भैरवको विशेष महत्त्व रहेकाले भैरवकै मूर्ति बनाउन लागिएको शाक्य बताउँछन्। उनका अनुसार वटुक भैरव, टीका भैरव, आनन्द भैरव, काल भैरव, आकाश भैरव आदिको पूजा हुनुले पनि यहाँ प्राचीन कालदेखि भैरवको विशेष महत्त्व छ। उनी भन्छन्, ‘यहाँका धेरै जातजातिले पूजाआजा गर्ने भएकाले भैरवकै मूर्ति रोजेको हुँ।’
नेपालमा भैरव पूजाको प्राचीन परम्परा रहेको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भैरवलाई शिवको रिसाहा स्वरूप मानिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा भैरव पूजालाई विभिन्न समुदायले भिन्नाभिन्नै तरिकाले पूजा गर्ने चलन रहेको बताउँछिन् संस्कृतिविद् डा. पूनम राणा।
उनी भन्छिन्, ‘भैरवलाई आकाशका देवताका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ, इन्द्रलाई पानी पार्ने देवता मानेजस्तै।’
अर्की संस्कृतिविद् डा. सन्ध्या पराजुलीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भैरवको एकल मूर्ति बन्न थालेको लिच्छविकालदेखि हो।
उनी भन्छिन्, ‘त्यसअघिका शिवलिंगमा दक्षिण मुख अघोरलाई भैरवका रूपमा पूजा गरिने प्राचीन परम्परा हो।’ उनका अनुसार भैरवको विकराल र उन्मक्त स्वरुपको बनाउने चलन छ।
काठमाडौंको सम्बन्ध मछिन्द्रनाथको रथसँग गाँसिएको छ। मछिन्द्रनाथको चार पांग्रालाई चार भैरवको प्रतीक मान्ने पनि छन्। काठमाडौं र भक्तपुरमा पनि इन्द्रजात्राका बेला भैरवको विशेष पूजा हुन्छ। कतिपयले भैरवलाई आराध्यदेवका रूपमा पनि पूजा गर्छन्।
संस्कृतिविद् राणा भन्छिन्, ‘अन्य देवीदेवतालाई पूजा गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिन्छ। केही देवीदेवताले केही भुलचुक भएमा क्षमा दिन्छन् भन्ने विश्वास छ। तर भैरवको पूजा गर्दा भने केही तलमाथि हुन नहुने विश्वास छ।’
अब कसरी बन्ला नयाँ सरकार? यस्तो छ सम्भावना र अंकगणित
आईसीयू र भेन्टिलेटरबिनै बिरामी लिँदै जनमैत्री अस्पताल, अनुदान लिएर पनि संक्रमितसँग दैनिक १५ हजार असुली